नेप्से ९ अंकले घट्दा तीन... :: कमल नेपाल :: Setopati
नेप्से ९ अंकले घट्दा तीन कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए १०%
समग्र बजारको परिसूचक नेप्से ९. ४ अंकले घटे पनि सोमबार तीन कम्पनीका लगानीकर्ताले भने १० प्रतिशत नाफा कमाउन सफल भए। स्वरोजगार लघुवित्त, हिमालयन डिस्टिलरी र हिमालयन पावर पार्टनरका लगानीकर्ताले १० प्रतिशत नाफा कमाए।
स्वरोजगार लघुवित्तले २५ प्रतिशत बोनसपछि शत प्रतिशत हकप्रद दिने घोषणा गरेकाले लगानीकर्ताको चाप परेको हो। कम्पनीको मूल्य प्रतिकित्ता २५६५ पुगेको छ।
त्यस्तै दुई साताअघि २ हजार नाघेको हिमालयन डिस्टिलरीको मूल्य एकाएक घट्दै १५ सय मुनि झरेपछि एकैपटक किन्नेहरु बढ्दा मूल्य बढेको हो। उसको मूल्य प्रतिकित्ता १५४६ कायम भएको छ।
अर्को हिमालयन पावर पार्टनरको भने आइपिओ बिक्रीपछि हालै कारोबार खुलेकाले सस्तो मूल्यमा किन्नेहरु बढेका हुन्। कम्पनीको मूल्य प्रतिकित्ता ४७१ कायम भएको छ।
यस दिन कारोबार रकम पनि बढेको छ। कुल १५९ कम्पनीको ९० करोड ९३ लाखको सेयर खरिदबिक्री भएको छ। बजारको पुँजीकरण १९ खर्ब २ अर्बमा झरेको छ।
विकास बैंक र उत्पादनबाहेक सबै समूह ओर्लिएका छन्। विकास बैंक ६ र उत्पादन समूह २७ अंकले बढे । बैंकिङ १३, होटल १८, जलविद्युत ७, फाइनान्स ७, बिमा ४५ र अन्य समूह २ अंकले घटेका छन्।
कारोबारका आधारमा पनि स्वरोजगार लघुवित्त नै अगाडि रह्यो। उसको कुल ६ करोड ६३ लाखको कारोबार भयो। दोस्रोमा रहेको छिमेक लघुवित्तको ६ करोड २५ लाख तथा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ५ करोड ८३ लाखको सेयर किनबेच भएको छ।
गुमाउनेमा सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किमका लगानीकर्ता अगाडि रहे। उनीहरुले १० प्रतिशत मूल्य गुमाएका छन्। त्यस्तै नविल ब्यालेन्स फण्डको मूल्य ९.८ प्रतिशत तथा जनरल फाइनान्सको मूल्य ९. ३ प्रतिशतले घटेको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ १२, २०७४, ०३:४६:२३